Tag: dhibco taabasho | Martech Zone
Tag: dhibco taabasho
5-ta Top XNUMX ee Adeegga Macaamiisha (Iyo Sida Loo Sixi Karo)
Jimcaha, Sebtember 22, 2017 Douglas Karr
Weli waxaa jira shirkado badan oo rumeysan adeegga macaamiisha iyo suuqgeyntu inay yihiin shaqooyin ka duwan ururka dhexdiisa. Nasiib darrose, labada waaxood ayaa inta badan isku khilaafsan urur dhexdiisa. Adeegga macaamiisha ayaa hadda leh cunsur guud oo saameyn ku yeelan kara - iyo xitaa burburin kara - sumcadda shirkadda, taasoo carqaladeynaysa horumarka ay suuqleydu sameynayaan. In kasta oo isbeddelka dijitaalka ah uu kula wareegayo qaybta adeegga macaamiisha, bixinta khibrad weyn oo macaamiil ah ayaa weli ah
Xiriir ahaan: Kordhi Shabakadaada ROI
Isniin, February 24, 2014 Douglas Karr
Maareynta xiriirka rajadaada iyo macaamiishaada ayaa ah dagaalka intiisa badan marka ay timaado haynta iyo helitaanka. In kasta oo soo noqoshada maalgashiga ay tahay mid ufiican macaamiisheenna, ka caawinta fikirka, talobixinta madal, iyo xitaa iskuxiraha wararka warshadaha, cilmi baarista tartanka, iibiyeyaasha kale iyo codsadayaasha shaqo inta badan muhiimad iyo qiimo ayey u leeyihiin. CRM-ka caadiga ahi wuxuu awood u leeyahay inuu duubo dhibcaha kooxdaada - laakiin daruuri maahan